Manufacturing Sector ရှိ အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ငန်းများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း - Industry Directory
ဘွဲ့ရပြီးကာစ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အခက်အခဲများ၌ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သောသူများ၏ အလုပ်အကိုင်များသည် မိမိ သင်ကြားခဲ့သော ပညာရေးနှင့် ထပ်တူကျသော်လည်း အချို့သော သူများအတွက် များစွာလွဲချော်နေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် စာသင်ကြားနေစဉ်မှာပင် မိမိသင်ကြားမည့် ဘာသာရပ်နှင့် ဆက်စပ်သော အပြင်လောကရှိ လုပ်ငန်းအခြေအနေများကိုပါ တွဲလေ့လာသင့်သည်။ စာရေးသူသည် Industrial Management ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခဲ့ရသူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်း အကြောင်းများကိုပါ တစ်ပါတည်း လေ့လာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူ ရှာဖွေလေ့လာခဲ့သမျှ စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေအနေနှင့် အသုံးများသော အလုပ်အကိုင်တတ်လမ်းအချက်အလက်များကို စာဖတ်သူအားလုံးနှင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
Manufacturing sector ၏ယေဘုယျအခြေအနေ
Manufacturing Sector သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆေးဝါး ၊မော်တော်ယာဉ်၊ ကုန်တိန်နာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း အ၀တ်အထည်များ ချုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအမြောက်အများ ရှာခဲ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ တွင် ပြည်ပ project (၁၃၀) ခု နှင့် ပြည်တွင်း project (၂၅) ခု လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ပြီး အလုပ်အကိုင်ပေါင်း (၈) သောင်းကျော် ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ဤ Sector သည် နေ့စဉ်သုံး ထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှုများ နှင့် လုပ်ငန်းသုံး အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ဤနယ်ပယ်သည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာပေးနိုင်သည်သာမက ချည်ထည်၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ မော်တော်ယာဉ် နှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင်လည်းတွေ့ရှိရသည်။
Manufacturing လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများလည်း များစွာလိုအပ်သည်။ Manufacturer များသည်လည်း ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှုရှိသော နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေကြပါသည်။ အနာဂါတ်တွင် အလုပ်အကိုင် များစွာသည် နည်းပညာများနှင့် အစားထိုးခံရနိုင်မည်။ သို့သော် ဆက်လက်၍ လိုအပ်နေဦးမည့် အလုပ်အကိုင် နေရာအချို့သည်လည်း လစာကောင်းများဖြင့် ကျန်ရှိကာ ရပ်တည်နိုင်ပေဦးမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့ ရှင်သန်နိုင်စေရန်အတွက်မှု လူငယ်များမှ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးများနှင့် လုံလောက်အောင် ဖြည့်စည်းထားရမည်။
Operation Manager တစ်ယောက်သည် အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံကို ကြီးကြပ် စောင့်ကြည့်ပေးရပါသည်။ သူတို့တွေပာာ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ Operation ရှုထောင့်တိုင်း၏ အမြတ်အစွန်းရနိုင်ချက်၊ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ထွက်ကုန်တိုင်း၏ အရည်အသွေးပြည့်မှီမှု စစ်ဆေးချက်များမှာ ပါဝင်ရပါသည်။ ထိုအထဲတွင် အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အလုပ်ခွင် လုံခြုံရေးတို့လည်း ပါဝင်သည်။ အခုလို အလုပ်အကိုင်သည် Manufacturing နယ်ပယ်တွင်း အတွေ့အကြုံ များစွာလိုအပ်၍ လက်ရှိပညာရှင်အများစုမှာ Engineering သို့မပာုတ် Production စသောနယ်ပယ်များမှာ လုပ်ကိုင်ရင်း ရာထူးတိုးပြီးနောက် ထိုရာထူးကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
-Strong Analytical Skills, Reporting & Data Analysis Skill
-Excellent English Written & Verbal Communication Skill
-Advance Excel & Power Point Skill
-2to7years of experience
-Good Co-ordination, process management, active listening & Decision making skills
-Spoken English & Presentation Skill
-5years+ Experience in Customer Service & Operations
- Experience in Banking/FMCG Business
-Any Bachelor Degree or Diploma
-Background in Management
-Basic Spoken & Written English
-Basic Computer Skills (Words, Excel & Email)
- Experience is relevant field isaplus
အများစုသော manufacturing လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း ဆွဲသော ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပိုမို မြန်ဆန် ထိရောက်စေရန်၊ အရည်အသွေးမှီစေရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရန် ဆောင်ရွက်ပေးသော Engineer များရှိသည်။ ထို Engineer များသည် အနည်းဆုံး Mechanical, Electrical သို့မပာုတ် Industrial Engineering ကဲ့သို့သော Engineer ဆိုင်ရာ Bachelor’s Degree ရရှိပြီးရန်လိုအပ်သည်။
-English Spoken & Written
-System Management (Quality/Production/ Warehouse)
Production Engineer (Material)
-Minimum Diploma in Manufacturing Engineering or Equivalent
-Knowledge of SAP/ERP
-Minimum of 3-5 years of experience in Material Planning in Manufacturing Environment.
-Any Fresh Graduate
-Bachelor in Engineering (Electronic/Electrical/ Mechanical)
-Must be conversational level in English Language
-Auto CAD 2D, 3D
-2years of experience in manufacturing industries
Quality Assurance/Quality Control/Final Inspector
-Bachelor Degree of Engineering (Mechanical/Electrical/ Mechatronic)
3. Buyers and Purchasing Managers
Manufacturing လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန် ကုန်ကြမ်းများဦးစွာ ၀ယ်ရပါသည်။ Buyers and Purchasing Manager များသည် ထိုသို့ ကုန်ကြမ်း ဝယ်ယူရာတွင် ရောင်းချသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ ကုန်ကြမ်း အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဈေးညှိခြင်းများလုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ထိုအလုပ်အကိုင်သည်လည်း Business, Engineering နှင့် Economics ဆိုင်ရာ bachelor’s degree ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
-Analytical & Communication Skill
-Fluent English for both writing & speaking
At least (5) years experience in Procurement & Logistics field
-Good Oral & Written Communication Skill
Good English & Communication Skill
4 years experience in Manufacturing Industry
Computer Skill, English4Skill, Communication Skill
3 years experience in Procurement & Supply Chain
Any graduate (or)Matriculation Passed
4.Assemblers and Fabricators
တစ်ချို့သော စက်ရုံ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် လူသားအရင်းအမြစ်များကို အဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ပစ္စည်းတပ်ဆင် ပြင်ဆင်သူ၊ အထည်အလိပ် ချုပ်လုပ်သူ ကြီးကြပ်သူများမှာ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ပြီးမြောက်အောင် စက်အားအပြင် လူအားပါ အသုံးပြုကြသည်။ အချို့သောနေရာများတွင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများ လိုအပ်သော်လည်း ထပ်ကာတစ်လဲလဲ လုပ်ဆောင်ရသော အဆင့်များသော အချို့နေရာများတွင် လူအားသာအသုံးပြုကြသည်။ ထိုအလုပ်အကိုင် အများစုမှာ Higher Diploma သို့မပာုတ် GED တို့လိုအပ်သည်။
Manufacturing Sector ၏အခက်အခဲများ
Manufacturing လုပ်ငန်းတွင် ဝရိန်ဆော်ခြင်းမှစ၍ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း အထိ ပါဝင်သည်။ ထိုသို့သော specialized အလုပ်အကိုင် အမျိုးမျိုးကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်မှီသော ဝန်ထမ်းများလိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ Manufacturing sector တွင် အလုပ်အကိုင်လိုအပ်နေသော်လည်း အဆင့်မြင့် နည်းပညာအတွေ့အကြုံမရှိသေးသော လောလောလပ်လပ် ဘွဲ့ရလူငယ် များစွာရှိသည်။ လုပ်ငန်းများမှာလည်း သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းရှိမှ အလုပ်ပေးချင်၍ လူငယ်များမှာ ထိုအရည်အချင်းများ ရရန်အလုပ်ရဖို့လိုသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အရည်အချင်း မပြည့်မှီသော လူငယ်များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး အလုပ်ရစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဘွဲ့ရကာစ လူငယ်စာဖတ်သူများကို အကြံပြုလိုသည်မှာ မိမိတို့သည် မည်မျှသော ကျောင်းအကောင်းစားများတွင် သင်ယူပြီးခဲ့သည်ရှိရှိ အလုပ်ခွင် စဝင်မည်ဆိုလျှင် အငယ်တန်း နေရာမှ စဝင်ရန် အသင့်ပြင်ထားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့သည် တွေ့ကြုံရမည့် အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန် အတတ်ပညာများ ရအောင် လေ့ကျင့် ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ လူငယ်များသည် လွန်တော်သောကြောင့် အချိန်မြန်မြန် ရာထူးတိုးရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ကျောင်းကောင်းမှပြီးသောကြောင့် manager ကဲ့သို့သော အဆင့်ကို တန်းရောက်စေသည်ဟူ၍ ထုံးစံမရှိပေ။ ထို့ကြောင့်ရာထူးငယ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ လစာနည်း သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရရှိလာသော အခွင့်အရေးများကို ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုရန် အကြံပေးလိုက်ပါသည်။
Read times	Last modified on Friday, 06 September 2019 17:07
မြန်မာ့စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အခြေအနေ သုံးလဆက်တိုက် တိုးတက်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်ရောင်းဈေးများ ကျဆင်းခဲ့